भेनेजुयलाको अपब्याख्या र अतिब्याख्या घातक
सात समुद्रपारीको देश भेनेजुयला यतिखेर नेपाली राजनीतिको सर्वाधिक चर्चित र रोचक विषय बनेको छ । सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिएको एउटा विज्ञप्तिपछि नेपाली राजनीतिमा भेनेजुयला प्रकरण डढेलो सरह फैलिन थालेको छ । भेनेजुयला प्रकरणले सत्तारुढ पार्टीभित्र असहज अवस्था उत्पन्न भएको छ तर खुलेर सबै पक्ष बोलिसकेका छैनन् । भेनेजुयला प्रकरणले सरकारलाई पनि असहज लागिरहेको प्रष्टै देखिन्छ ।
भेनेजुयलामा अमेरिकाले हस्तक्षेप गरकै हो, यसो भन्न कुनै आइतबार कुर्न पर्दैन । भेनेजुयलामा हस्तक्षेप भएको विरोधमा विभिन्न साना कम्युनिष्ट पार्टीहरूले पनि विज्ञप्ति दिएका छन् । तर, उनीहरूको विज्ञप्तिलाई अधिकांशले ध्यान दिएनन् । तर, प्रचण्डले दिएको विज्ञप्ति भने अर्कै विषय बन्न गयो । प्रचण्ड सत्तारुढ पार्टीका अध्यक्ष हुन् र उनलाई ‘वेटिङ प्राइमिनिस्टर’ पनि मानिन्छ । त्यसैले उनको बोलीको खास अर्थ लगाइयो । अरुले के के अर्थ लगाउँछन् भन्ने बेग्लै कुरा हो तर अमेरिका रिसायो ।
अमेरिका रिसाउनु चानचुने कुरा होइन, अहिले विश्वको सर्वशक्तिमान देश उही हो । नेपाललाई आर्थिक विकासमा राम्रै सहयोग गरिरहेको छ । हुन त अमेरिकी सहयोगका कारण नेपाल यो अवस्थासम्म आइपुगेको होइन तर उसले असहयोग ग¥यो भने चाहिँ नेपाल अप्ठेरोमा पर्छ । अमेरिका विश्वको ‘दादा’ नै हो ।
अमेरिकालाई नेपालले चिढ्याउनु बुद्धिमानी पक्कै पनि होइन । प्रचण्डले कम्युनिष्ट भाइचारालाई ध्यानमा राखेर, अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध गर्ने आफ्नो परम्परालाई ध्यानमा राखेर विज्ञप्ति दिएका हुन् भन्ने हामी मानौंला तर अमेरिकाले मानिदिएन । अमेरिका साँच्चै रिसायो । सरकारले आयोजना गरेको कूटनीतिक व्रिफिङमा अमेरिकी राजदूत उपस्थित नै भएनन् । उनको अनुपस्थितिलाई अर्थपूर्ण मान्नैपर्ने हुन्छ ।
कूटनीतिक व्रिफिङभन्दा पहिले नै परराष्ट मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गरी भेनेजुयला सम्बन्धमा धारणा सार्वजनिक गरेको थियो ।
परराष्ट्रको विज्ञप्ति असंलग्न परराष्ट्र नीतिको नेपाली परम्पराभित्रै आएको थियो । भेनेजुयलाको फैसला त्यहीँका जनताले गर्नुपर्छ भन्ने परराष्ट्रको धारणा अमेरिका अनुकूल देखियो तर त्यही विज्ञप्तिमा कुनै पनि देशमा हुने वैदेशिक हस्तक्षेपको नेपाल विरोध गर्छ पनि भनिएको थियो । यो धारणा चाहिँ अमेरिकाका लागि अनुकूल भएन । समग्रमा भन्ने हो भने अमेरिकालाई प्रचण्डको विज्ञप्ति पनि चित्त बुझेन, परराष्ट्रको विज्ञप्ति पनि चित्त बुझेन ।
अमेरिकालाई चित्त बुझेन भन्ने प्रष्ट भइसक्यो ? अब के हुन्छ ? प्रश्न यो हो । रिसाएको अमेरिकाले अब नेपाललाई के गर्छ ? प्रश्न यो हो । अनि, अमेरिकालाई फकाउन नेपालले के गर्छ ? यो पनि महत्वपूर्ण प्रश्न हो ।
अमेरिकासँग नेपालको खासै धेरै स्वार्थ बाझिँदैन, सीमाना पनि जोडिएको छैन । किन दुश्मनी मोल्ने ? अमेरिकाले अफगानस्थान, सिरिया, इराकमा सेना नै पठाएर हस्तक्षेप गरेको छ । अन्य विभिन्न देशमा हस्तक्षेप गरेको छ । मझौला दुरीको क्षेप्यास्त्र सम्बन्धी सम्झौताबाट पनि अमेरिका बाहिरिएको छ । युनेस्कोबाट समेत अमेरिका बाहिरिएको छ ।
यी सबै प्रकरणमा नेपाल बोल्यो ? नेकपा बोल्यो ? यसका नेताहरूले विज्ञप्ति जारी गरे ? केही समय अघि श्रीलंका र माल्दिभ्समा ठूलो राजनीतिक संकट आयो, खासखास देशहरूले निरन्तर हस्तक्षेप गरे । नेपाल बोल्यो ? दोक्लाममा भारत र चीनले भुटानलाई निरीह बनाएर द्वन्द्व गरे । नेपाल बोल्यो ? प्यालेष्टाइनमा अत्याचार भइरहेको छ । नेपाल बोल्यो त ?
अहँ नेपाल बोलेन । बोल्नुपर्दथ्यो होइन, जहाँ आफ्नो स्वार्थ गासिँदैन, जहाँ ठूला शक्तिहरू स्वार्थको द्वन्द्व गर्छन् त्यहाँ नेपाल किन बोल्ने ? किन कतै लाग्ने ? किन कसैको विरोध र समर्थन गर्ने ? तर, यसो भनिरहँदा भेनेजुयलामा भइरहेको विदेशी हस्तक्षेपमा चाहिँ आँखा चिम्म गर्न मिल्दैन । प्रचण्डले भेनेजुयलामा अमेरिकी हस्तक्षेप मात्र देखे । वास्तवमा सडकबाट घोषणा गरिएको सरकारलाई समर्थन दिने सबै देशले भेनेजुयलामा हस्तक्षेप गरेका छन् । ती सबैको विरोध गरेको भए प्रचण्डले विषयलाई वृहत् आयामबाट हेरेको पनि देखिन्थ्यो र अमेरिका यतिविघ्न रिसाउने अवस्था पनि आउँदैनथ्यो ।
पार्टी र सरकारको एउटै धारणा हुन्छ भन्ने नेपाली राजनीतिक परम्परामा देखिँदैन । आफ्नै पार्टीको सरकार हुँदा महंगी नियन्त्रण गर, यो काम गर, ऊ काम नगर भन्दै पार्टीले नै ज्ञापन पत्र बुझाएको देश हो नेपाल । प्रचण्डको विज्ञप्तिमा पार्टीको धारणा छ होला तर उनको विज्ञप्तिमा सरकारको पनि विचार खोज्नु र विचार देख्नु भनेको अमेरिकाको अर्घेल्याईं नै हो ।
अमेरिका रिसाएको र भेनेजुयला प्रकरण सतहमा आएको यो बेलालाई सरकारले मौकाको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । यही बेला नेपालले आफ्नो धारणा अझ प्रष्ट पारेर असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति आफू प्रतिवद्ध भएको देखाउनुपर्छ । ठूला देशहरूको स्वार्थको द्वन्द्वमा हामी बेसरोकार र तटस्थ बस्छौं भन्ने देखाउन सक्नुपर्छ । अमेरिका, भारत, चीन लगायत सबै ठूला देशहरू विरुद्ध लाग्दैनौं, कुनै पनि देशको पक्षमा लाग्न दिँदैनौं भनी आश्वस्त र विश्वस्त पार्नुपर्छ । विवाद सतहमा आएको बेला नै हो आश्वस्त र विश्वस्त पार्ने ।
भेनेजुयला प्रकरणको अपव्याख्या र अतिव्याख्याले देशको भलो गर्दैन । परराष्ट्र मामिला तथा अर्काे देशसँग सम्बन्ध बिग्रिने विषयमा सबैले संयमित हुनुपर्छ । सबैले देशहितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । अनावश्यक ठाउँमा बढी बोल्ने र अरुसँग हेपिने काम नेपालले गर्न हुँदैन । यसका लागि सबै दल र नेताहरूले ठण्डा दिमागले सोच्नुपयो । (साँघु साप्ताहिक, माघ २१)